एक योगदानकर्ता बन्नुहोस् र लेख सबमिट गर्नुहोस् - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
एक योगदानकर्ता बन्नुहोस् र लेख सबमिट गर्नुहोस्
सम्पादकको पिक जुलाई 15, 2019 सेप्टेम्बर 11, 2019 जे कालो ब्लग, व्यापार, क्यालिफोर्निया, चीन, सांप्रदायिक समाचार, सम्पादकको पिक, फ्रीलांस लेखन, स्वास्थ्य, जीवन शैली, ओरेगन, राजनीति, रूस, विज्ञान, खेल, लेख सबमिट गर्नुहोस्, प्रविधि
हाम्रो धेरै द्रुत बृद्धि भएको खुला प्लेटफर्ममा आम समाचार छ र कम्युनिष्ट समाचार भनिने सामान्य लेखहरूमा स्वागत छ। हामीलाई थाहा छैन हाम्रो व्यवसायको कुन भाग छिटो बढ्दै छ: हाम्रा पाठकहरू; वेबसाइट रेफरलहरू; वा नयाँ योगदानकर्ताहरू। कुनै पनि हिसाबले हामी हाम्रा नि: शुल्क सेवाहरूको द्रुत उद्यम-व्यापक वृद्धि देखिरहेका छौं।
उत्तर # १: पहिलो उत्तर भनेको कम्युनल समाचारका सबै लेखकहरूसँग स्वतन्त्रता छ जुन उनीहरूले पाउनु पर्दछ। CN छ छैन कर्पोरेट अमेरिका द्वारा संचालित शीर्ष डाउन समाचार सेवा। सीएन दैनिक व्यक्ति वा कम्पनीको लागि हो जुनसँग उनीहरूको बारेमा के लेख्न चाहान्छन् त्यसको लागि वास्तविक उत्कटता छ।
जब तपाईंको प्लेटफर्ममा काम गर्ने अनावश्यक लेखकहरूले तपाईंको सब भन्दा राम्रो दावी गर्छन्, त्यो इनामदायी छ र हामी आशा गर्दछौं कि सबै CN लेखकहरूले यस्तो महसुस गरे।
सीएन लेखले प्राय: गुगलको जैविक खोजीमा शीर्ष कथाहरू बनाउँदछ, पाठकहरूको संख्या बढाउँदै।
उत्तर # १: त्यहाँ धेरै स organizations्गठनहरू छन् जसले तपाईंलाई लेख सबमिट गर्न भनिरहेका छन् तर तपाईंको कडा मेहनत कहिल्यै देखिएको हुँदैन। उनीहरूको कुनै पाठक छैन, वा अझ खराब उनीहरूले तपाइँको कडा मेहनत उनीहरूको वेबसाइटमा राख्दछन् जहाँ भेट्टाउन अत्यन्त गाह्रो हुन्छ। त्यसोभए उनीहरूले तपाईंको लेखोट स्वीकार गरे पनि, उनीहरूले तपाईका लेखहरूलाई उचित समर्थन दिएनन्।
उत्तर # १: हामी तपाइँको लेख अधिक पाठकहरु को लागी मद्दत गर्दछौं। हाम्रो धेरै छिटो बढ्ने जैविक वेबसाइटसँग other०० भन्दा बढी योगदानकर्ताहरू छन्, प्राय जसो लेखहरू गुगल समाचारमा पोष्ट हुन्छन् (राय ब्ल्गहरू पनि), हाम्रो पोष्टहरू प्राय: कडा जैविक खोज प्लेसमेन्टहरू प्राप्त गर्दछन्, र पक्कै पनि हामी सबै मुख्य सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा पोष्ट गर्दछौं। हाम्रो पाठकहरूको मजबुत बृद्धि भइरहेको छ र यसलाई हेर्ने उत्तम तरिका हाम्रो पढ्नु हो सांप्रदायिक समाचार वेबसाइट।
रिसेन्ट हेर्न क्लिक गर्नुहोस् साम्प्रदायिक समाचार र ब्लग पोष्टहरूमा गुगल समाचार.
उत्तर # १: कुनै पनि CN पाठकलाई हाम्रो खुला प्लेटफर्ममा पोस्ट गर्न स्वागत छ। हामी लेखकहरू फिल्टर गर्दैनौं पूर्व-धारणा दृष्टिकोण प्रयोग गरेर। अक्सर CN मा पोस्ट गर्ने मानिस पनि पेशेवर लेखक हुँदैनन्। सायद तपाईले सोच्नुहुन्छ कि केहि पोइन्ट्स र / वा लेखहरू निरालो छन्। प्रायः, हामी केवल इमान्दार, दैनिक मानिसहरूको समाचार र विचारहरू प्रदान गर्दैछौं। प्रमुख निगमका कुनै सम्भ्रान्त लेखकहरूले केवल उनीहरू तपाईंलाई मात्र थाहा दिन चाहन्छन्। हामी त्यो गर्दैनौं! हामी लेखकहरूलाई उनीहरूको वास्तविक विश्वासलाई शब्दहरूमा राख्न आग्रह गर्दछौं, र तथ्यहरू वा ईमानदार रायमा आधारित समाचार प्रदान गर्दछौं।
हामी चाहन्छौं कि हाम्रा पाठकहरू विचारको सन्तुलन बिभिन्न भिन्न दृष्टिकोणबाट पाउँदछन्, र हुनसक्छ केही दृश्यहरू तपाईं मुख्यधाराका समाचारहरूबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। हामी बिभिन्न समाचार र विचार सेवा हौं र हामीलाई गर्व छ कि यो एकदम राम्रो पाइएको छ।
हामीसँग सांप्रदायिक समाचारमा नियम र नीतिहरू छन्। हामी यसलाई सकेसम्म लेखक मैत्री बनाउने प्रयास गर्दछौं तर तपाईंले योगदानकर्ता बन्नु अघि तपाईंले ती राम्ररी पढ्नुपर्दछ।
सांप्रदायिक समाचारमा लेखहरू पेश गर्न, पहिले तपाईले योगदानकर्ता बन्नु पर्छ। यो धेरै सजिलो र सीधा अगाडि छ।
सबै लेखहरू र ब्लगहरू पहिलो पृष्ठमा पोस्ट गरिन्छ, जहाँ हरेक नयाँ लेख सेकेन्डमा स्पट हुन्छ, र प्रकाशित हुँदा तपाइँले एक ईमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ।
कृपया ध्यान दिनुहोस्: तपाईंको केहि लेख गुगल समाचार द्वारा लिइए पछि, प्राय जसो योगदानकर्ताहरू जीवनीहरू पनि गुगल समाचारमा प्रकाशित हुन्छन्। त्यसोभए केहि क्षण लिनुहोस् र बायो लेख्नुहोस् जुन तपाईं तपाईंको आमाले पढेको चाहनुहुन्छ (किनकि हुन सक्छ उहाँ!)।
तपाईले योगदानकर्ताको रूपमा दर्ता गरेपछि, तपाई जति धेरै चाहानु भएको लेख, तपाईले जहिले चाहानुहुन्छ, पेश गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग सबै विश्वका लेखकहरू छन् (प्रत्येक महाद्वीप सहित), तर हामी विश्वास गर्दछौं कि विशाल बहुमत संयुक्त राज्यका हुन्। हाम्रा लेखकहरू कहिँ पनि दिनको एक पटकबाट एक महिनामा एक पटक सबमिट गर्छन्। हामी प्रत्येक लेखसँग एकसाथ व्यवहार गर्दछौं एक प्रशिक्षित सम्पादकहरूले व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूलाई पेशाको रूपमा पढ्ने हाम्रा सबै लेखकहरूको लागि उत्तम र उच्च गुणवत्ता सेवा सुनिश्चित गर्न।
तपाइँ यहाँ एक लेख सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ.
त्यसो भए यो तपाई चाहानुहुन्छ:
सयौं अन्य लेखकहरूसँग साझेदार जोसँग उनीहरूको बारेमा के लेख्ने इच्छा हुन्छ।
ठूलो समाचार स्रोतबाट वितरण प्राप्त गर्नुहोस्;
एक राय पढ्नुहोस् जुन तपाईले प्राय अन्य वेबपृष्ठहरूमा देख्नुहुने छैन;
त्यसो भए कृपया पढ्न र योगदान दिनमा सामेल हुनुहोस् सांप्रदायिक समाचार.
ब्लगरहरू चाहन्थे सांप्रदायिक समाचार योगदानकर्ता स्वतन्त्र लेखकहरु स्वतन्त्र लेखन योगदानकर्ताको रूपमा दर्ता गर्नुहोस् Submit लेख सबमिट गर्नुहोस् लेखकहरू चाहन्थे
बेलायतले ईरानी तेल ट्याank्कर रिलीज गर्ने प्रस्ताव गर्दछ - डिस्कालेटिंग टेन्शन
युरोपमा बसाई सरोकार: युएनले घातक बम विष्फोट पछि लिबियालाई नजरबन्द केन्द्रहरू बन्द गर्न आग्रह गर्‍यो